गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल असोज ६ गते मंगलबारको राशिफल Canada Nepal
गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल असोज ६ गते मंगलबारको राशिफल
क्यानाडानेपाल डेस्क आश्विन ६ २०७७
आश्विन ६, २०७७ मंगलवार १२:५०:४६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। शनि नाम संस्कृत शब्द शनै बाट आएको हो जसको अर्थ "ढिलो" वा "सुस्त" हो, यो हिन्दु ज्योतिशास्त्र अनुसार नौ ग्रहहरू मध्यको एक सुस्त ग्रहको रूपमा चिनिने गर्दछ । साथै हिन्दु धर्मको परम्परागत ग्रन्थहरूमा शनिलाई तरबार वा दण्ड (राजदण्ड) बोक्ने र कागमा सवार हुने एक चरित्र वा पात्रको रूपमा देखाइएको छ।
धर्मग्रन्थका अनुसार उनलाई न्यायका देवता समेत भनेर चिनिन्छ। तर, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि कसैलाई शनि ग्रहको बाधा उत्पन्न हुन्छ भने ऊ अरू सबै ग्रहहरू राम्रो परिणाम पाउनबाट वञ्चित हुन्छ। त्यसै गरी, शनिको साढे सातको दशा पनि भयङ्कर र कष्टपूर्ण मानिन्छ।
शनि लाई शनिवारको देवता पनि भनिने गरिन्छ । उनी सूर्यदेव र उनकी पत्नी छाँयाका पुत्र हुन् उनको भाइको नाम यम हो, जसलाई मृत्युको देवता भनेर पनि चिनिन्छ। यी दुवै दाजु भाइले मनुष्यको कर्म अनुसारको फल दिने गर्दछन्
जहाँ शनिदेवले मनुष्य जीवित हुँदा जीवनमा गरेका कार्यको नतिजा अनुसारको उचित वरदान र दण्ड दिने गर्दछन् भने यमले मृत्युपछि उसले गरेका राम्रा र नराम्रा कामको लेखा जोखा गरी उचित नतिजा दिने गर्दछन्। शनिलाई सौरा (सूर्य-देवताको छोरा), क्रुरादृश वा क्रुलोचन (क्रूर आँखा भएका), मन्डु (सुस्त वा ढिलो), पङ्गु (अक्षम), सप्तर्ची (सात आँखा भएको) र असित (अँध्यारो) पनि भनिन्छ।
छाँया एक पतिव्रता पत्नी थिइन, उनी सूर्यदेवको सेवा गर्न यति लिन थिन, उनलाई सुर्को तापको वास्ता थिएन, त्यसैले त्यस तापको प्रभावका कारण शनि जन्मयता नै पूर्ण कालो भएका हुन्, जुन कुराले सूर्यदेव निकै निराश र छायाँ प्रति शंखा पनि उत्पन्न गरेका थिए।
शनिदेवको पहिलो दृस्टीनै आफ्नो बुवा सूर्यदेवलाई ग्रहणमा पुर्‍यायो जसका कारण उनलाई जन्मदेखि नै क्रुलोचन वा दुष्टको संज्ञा दिन थालियो। वास्तवमा आफ्नो बुबाको आफू कालो भएको उदासीनता भएका कारण शनिले क्रोधित भई सूर्यदेवलाई पनि एकमयका लागि कालो हुनु पर्ने श्राप दिएका थिए जसलाई आजकाल ग्रहणको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
वैदिक ज्योतिषशास्त्रअनुसार साढे सातको लामो दशा एक कष्टकर समय हो । यसैका कारण जीवनमा धेरै चुनौती, दुर्घटना,असफलता, स्वास्थ्यमा समस्या, धनको नाश हुने गर्दछ भन्ने गरेका छन्।
यद्यपि अर्काथरि ज्योतिष विद्यामा लागेकाहरूले साढे सात दशा हानिकारक नभएको र वास्तवमा यस अवधिमा धेरै सफलता हासिल गर्न सकिने किनभने यस अवधिमा थुप्रै असफलताका पाठहरू सिक्ने र हरेक चुनौतीको सामना गर्न सक्ने भएर निस्कने साथै मानसिक विकाश पनि उच्चतम हिसाबमा हुने विश्वास गरिएको छ।
कार्तिक १५, २०७७ शनिवार ०९:००:१७ बजे : प्रकाशित
शुभ कार्य गर्नु अघि किन खाइन्छ दही ?
काठमाडौँ। हिन्दु परम्परा अनुसार कुनै पनि कार्य वा कतैको लामो यात्रा गर्नु अघि दही खानु एकदम शुभ मानिन्छ। त्यस्तै कुनै महत्त्वपूर्ण परीक्षा दिनु अघि पनि गुलियो दहीको सेवन गर्ने गरिन्छ। यसमा दुवै वैज्ञानिकता तथा पारम्परिक विश्वास रहेको छ।
पारम्परिक तथा शास्त्रीय मान्यता अनुसार कुनै पनि कार्य, यात्रा वा महत्त्वपूर्ण परीक्षा दिनु अघि दहीको सेवन गर्नु मङ्गलकारी वा शुभ मानिन्छ। यसले सकारात्मक ऊर्जा बढाउने गर्दछ त्यस्तै दहीमा चिनी मिसाएर सेवन गर्दा मानिसको शारीरिक तथा मानसिक ऊर्जा बढेर आउने विश्वास छ।
त्यस्तै, यसको वैज्ञानिकतालाई हेर्ने हो भने, आयुर्वेदमा दहिलाई चिसो तथा पौष्टिक खाना रूपमा लिइन्छ। यसले पाचन प्रणालीलाई शान्त बनाइ पेटलाई सफा राख्न मद्दत गर्दछ। यसै गरी, यसमा भएका गुणहरूले स्मरण शक्ति बढाउनुका साथै मानिसको एकाग्रतालाई वृद्धि गर्ने गर्दछ।
यसका साथै दहीमा चिनी मिसाएर खाँदा सकारात्मक ऊर्जा बढ्ने गर्छ भने कुनै नौलो कार्य, यात्रा तथा परीक्षा दिनु अघि मानिसको मनमा अनेकौँ सोचाई आउने गर्दछ जसले तनावको स्थिति सृजना नित्माउदछ। तसर्थ, मानसिक तनाव कम गर्न र सम्पूर्ण शरीरलाई आनन्ददायी बनाउन दही र चिनीको सेवन गर्ने चलन छ।
कार्तिक १०, २०७७ सोमवार ०८:३८:३७ बजे : प्रकाशित
बिक्रमबाबाले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! हेर्नुहोस् आज २०७७ असोज २६ गते सोमबारको राशिफल
मेष राशि - पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा अधिक समय ब्यतित हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन ।सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ ।
आश्विन २६, २०७७ सोमवार ०६:५४:३४ बजे : प्रकाशित
गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल असोज २० गते मंगलबारको राशिफल
मेष राशि - नजिकका आफन्तजनहरु बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । संचित रकम खर्चगर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । वाणीका कारण सामान्य बादविवादको झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ ।
मकर राशि - तपाईको क्षमताको उचित मुल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका माध्यमबाटँ आम्दानिका निम्ती दिर्घकालिन श्रोतहरु फेला पर्नेछन । बौधिक तथा बिशिष्ट ब्यत्तीहरुको रायसल्लाहाले नयाँकार्यको प्रारम्भहुन सक्ने योग रहेकोछ । पूराना मित्रजनरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला ।
मीन राशि - तपाइ सगँ रुष्ट आफन्तजनहरु सहजै नजिक हुन खोज्नेछन । मित्रहरुको साथ सहयोग बाँट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । धार्मिक यात्राको सम्भाबना रहनेछ । प्रतिश्पर्दीहरु कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्य क्षेत्र सहज बन्नेछ । जटिल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
आश्विन २०, २०७७ मंगलवार ०७:०६:४७ बजे : प्रकाशित
सपनामा कुखुरा देख्दा के हुन्छ ?
काठमाडौँ। हरेक देखिएका सपनाले केही अर्थ बोकेको हुन्छ भनिन्छ, चाहे त्यो खुला आँखाले देखिएको सपना होस् वा बन्द आँखा अर्थात सुतेको बेला देखिएको सपना नै किन नहोस् । प्रायःजसो हामी हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सपनाहरु देख्ने गर्छौं भने कहिले काहीँ सपनाहरु अलि भिन्न किसिमका हुन्छन्। त्यस्तै, हामी मध्ये कतिपयले सपनामा कुखुरा पनि देखेका हुन्छौं। आखिर सपनामा कुखुरा देख्दा कस्तो संकेत गर्छ ?
जानिराखौं सपनामा कुखुरा देख्नुका फाइदा र बेफाइदाः
१. सपनामा स्वास्थ र तन्दुरुस्त कुखुरा देख्नु शुभ मानिन्छ। यसले आफुले गरेको काममा प्रशंसा मिल्ने संकेत गर्दछ। प्रशंसा चाहे कार्य क्षेत्रमा होस् वा निजी जीवनमा।
२. सपनामा कमजोर कुखुरा देखियो भने यसले अशुभ संकेत गर्दछ। यस्तो सपनाले आउने समयमा आफु लज्जित हुने पर्ने दर्शाउँछ। यस्तो सपनाले भविष्यमा आफु यस्तो जञ्जालमा फस्ने जहाँबाट निक्लिन गारो हुने संकेत गर्दछ।
३. यदि सपनामा कुखुराको अण्डा देखियो भने यसले शुभ संकेत गर्दछ। अण्डाले जीवनमा नयाँ सुरुवात, नयाँ जीवन, ज्ञान र सौभाग्य दर्शाउँदछ। सपनामा अण्डा देख्दा चाडैं शुभ समाचार सुन्न पाइने संकेत गर्दछ । त्यसैगरी कहिले काहीँ यस्तो सपनाले आफुले मन पराएको जीवनसाथी मिल्ने संकेत गर्दछ।
४. यदि कुखुरा सहित चल्लाहरु सपनामा देखियो भने आत्यधिक शुभ हुने गर्दछ। यस्तो सपनाले कोहि नजिकको आफन्तको विबाहको मनोकामना पुरा हुने गर्दछ।
५. सपनामा यदि मरेको कुखुरा देखियो भने यसले जिवनमा धेरै नकारात्मक असर पर्ने संकेत गर्दछ। मरेको कुखुराको सपनाले जीवन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको र आफुले विश्वास गरेकोले धोका दिने संकेत गर्दछ।
६. सपनामा यदि कुखुराको हत्या गरियो भने यसले बेग्लै अर्थ बोकेको हुन्छ। यस्तो सपनाले आफुले गुमाइसकेको आफ्नो शक्ति फेरि प्राप्त हुने संकेत गर्दछ। अर्थात् यदि जीवनमा आफ्नो भन्दा अरुको प्रभाव बढी छ भने यस्तो सपना देख्दा जीवन आफ्नो नियन्त्रणमा आउने र विग्रिएका सबै काम बन्ने गर्दछ।
७. यदि कुखुराको मासु खाएको सपना देखियो भने यसले शुभ संकेत गर्दछ। यस्तो सपना देख्दा जीवनमा छिट्टै सफलता मिल्ने गर्दछ। त्यसैगरी, यस्तो सपनाले जीवन सुधार हुने, चाहेको सुख सुविधाहरु मिल्ने संकेत गर्दछ।
आश्विन १६, २०७७ शुक्रवार १९:१५:२६ बजे : प्रकाशित
पाथीभरा माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् आज २०७६ असोज २ गते शुक्रबारको राशिफल
मेष राशि -अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्यसम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछन । हरकोहीको बिश्वासमा नपर्नु उत्तम रहनेछ । कुराकाट्ने ह?को बृद्धि हुनेछ । परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ । नजिकका मित्र बाट धोका हुन सक्छ ।
बृष राशि - आफुभन्दा सानाको साथ सहयोगमा गरीएका कार्य सहजता पुर्ण सम्पादन हुनेछन । अध्यनअध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । नयाँकार्य थालनिको अवसर समेत प्राप्त हुनेछ । आर्र्थीक क्षेत्र सबल रहनेछ । बौधिक ब्यक्तित्वह?को सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ ।
कर्कट राशि - बल तथा प्रराक्रमका बृद्धिहुने योग रहेकोछ । नयाँ मित्रजनह? सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ ।तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय अन्य ब्यतिह?ले प्राप्त गर्नेछन । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ लगानि गर्दा बिशेष होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ ।
सिंह राशि - थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनह?को साथ सहयोगमा अधुराकार्य ह? सम्पादित रहनेछन । आम्दानि मध्यम रहने समय रहेकोछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ ।
बृश्चिक राशि - मित्रजनहरुको साथसहयोग प्राप्त रहनेछ । सन्तान शुःख प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोटपटक सहनु पर्ला । नयाँ कामको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । बौधिक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । अ?को बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ ।
धनु राशि - सामाजिक कार्यमा जुट्नेसमय रहेकोछ । सभासम्मेलनजन्य कार्यमा सामान्य मानसम्मानको प्राप्ती हुनेछ । मान्यजनह?को स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सबारी साधन तथा भौतिक साधनको प्रायोगमा साबधानि अपनाउनु होला । कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
मकर राशि - धार्मीक क्षेत्रको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मित्र तथा दाजुभाईह? सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अ?द्वारा गरीएको कार्य त्?टिका कारण तपाईलाई सामान्य तनाव आईपर्न सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा मन लागेपनि सामान्य क्रुटि ले मानशिक चिन्ता दिलाउने छ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अ?ले उठाउन सक्नेछन ।
कुम्भ राशि - बिश्वासिला ब्यत्तित्वह?बाट धोकाहुनसक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाणीका कारण आफन्त जनह? सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । मनमा सामान्य डर पैदा हुने साथै मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । मान्यजनको साथ सहयोले आम्दानिका क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ ।
मिन राशि - बौदिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तमरहेकोछ । आय आर्जनका निम्ती समय राम्रो रहेकोछ । आम्दानिका बिभीन्न श्रोतह? फेला पर्नेछन । पारीवरिक शुःख प्राप्त हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
आश्विन २, २०७७ शुक्रवार १३:२०:४६ बजे : प्रकाशित
# पाथीभरा माता